यर्मिया3ERV-NE - “यदि एकजना - Bible Gateway
3 “यदि एकजना मानिसले आफ्नी पत्नीसित छुटानाम गर्छ,
र त्यस पत्नीले अर्को मानिससित विवाह गरी भने
के त्यो पहिलो मानिस त्यही स्त्रीसित फेरि सम्बन्ध राख्न आँउछ? अँह।
यदि त्यस स्त्रीकहाँ त्यो पहिलो पुरूष फर्की आए, जमीन नै एकदमै दूषित हुनेछ।
तिमी धेरै प्रेमीहरूसित वेश्या झैं व्यवहार गरिरहेका छौ,
अनि अब तिमी मकहाँ फर्की आउनु चाहन्छौ।”
यो सन्देश परमप्रभुबाट आएको हो।
2 “माथि पहाडको चुचुराहरू हेर,
के त्यहाँ कुनै ठाउँ छ जहाँ तिम्रा प्रेमिकाहरूसँग तिमीले प्रेम रचेका छैनौ?
अरबी मरुभूमिमा फिरन्ते झैं,
आफ्नो प्रेमीहरूको प्रतीक्षा तिमी बाटोको किनारमा पर्खेका थियौ।
तिमीले भूमि ‘दूषित’ पार्यौ।
किनभने तिमीले थुप्रै नराम्रा कामहरू गर्यौ।
साथै तिमी मप्रति अभक्त भयौ।
3 तिमीले पाप गर्यौ, यसकारण पानी परेन।
त्यहाँ पानी पर्ने समयमा कुनै पानी परेन,
तर अझ तिमी लज्जित हुन अस्वीकर गर्छौ।
तिम्रो अनुहार हेर्दा एउटा वेश्याको अनुहारमा हेरे जस्तो हुन्छ जो निर्लज हुन्छे।
तिमी पनि आफूले जे गर्यौ त्यसको लागि निर्लज्ज छौ।
4 तर अहिले तिमीले मलाई पुकारिरहेछौ, ‘पिता’?
तिमीले भन्यौ, ‘तपाईं मेरो युवावस्था देखिको मित्र हुनुहुन्छ।’
5 तिमीले यसो पनि भन्यौ, ‘परमेश्वर मसित सधैँ क्रोधित रहनु हुँदैन।
परमेश्वरको रीस धेरै बेर रहने छैन।’
“यहूदा, तिमीले यी त कुराहरू भन्यौ,
तर तिमीले सके जति दुष्ट कामहरू गर्यौ।”
दुइ जना नराम्रा दिदी बहिनी, इस्राएल र यहूदा
6 योशियाह राजाले यहूदामा राज गरेको समयमा परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, “यर्मिया, इस्राएलले गरेको पाप तिमीले देख्यौ? तिमीले देख्यौ कि ऊ मप्रति अविश्वासी छ। तिनले प्रत्येक पहाडमाथि अनि हरियो रूख मनि व्यभिचार गरिरहेकी थिई।7मैले आफैंलाई भनें, ‘उसले यी सब पाप कर्म गरिसके पछि, मकहाँ फर्किन्छ होला।’ तर ऊ मकहाँ आएन। अनि इस्राएलले गरेको उसको अविश्वासी बहिनी यहूदाले देखी। 8 इस्राएल अविश्वासी थिए अनि तिनले चालपाई कि मैले उसलाई टाढो पठाएँ। इस्राएलले चालपाई कि उसले व्यभिचार पाप गरेकीले मैले उसित छुटानाम गरें। तर यसले उसको अविश्वासी बहिनीलाई कुनै डर भएन। यहूदा पनि बाहिर गई अनि वेश्या झैं काम गर्नु लागि।9यहूदाले आफू वेश्या झैं काम गरिरहेको कुनै ध्यान नै दिएन। यसकारण उसले आफ्नो देश ‘अशुद्ध’ बनाई। उसले चट्टान र काठले बनिएका मूर्तिहरू पूजा गरेर व्यभिचारी पाप गरी। 10 इस्राएलकी अविश्वासी बहिनी यहूदा मकहाँ मन खोलेर आएन। उसले खुल्ला हृदयले आए की झैं निहुँ गरी।” यो सन्देश परमप्रभुबाट आएको हो।
11 परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, “विश्वासहीन इस्राएल अविश्वासी यहूदा जस्ता खराब छैन। 12 यर्मिया, उत्तर दिशा तिर अघि बढ अनि यो सन्देश घोषणा गर:
“‘हे इस्राएलका विश्वासहीन मानिसहरू हो, फर्की आऊ।’
यो सन्देश परमप्रभुबाट आएको थियो।
‘तिमीहरू माथि आँखा तर्न बन्द गर्छु,
किनकि म पूर्ण कृपालु छु।’
यो सन्देश परमप्रभुबाट आएका हो:
‘म अब उसो तिमीसित रीस गर्ने छैन।
13 तिमीले आफ्नो खराब काम स्वीकार गर्नु पर्छ।
तिमीले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको विरुद्ध
अपराध गरेका छौ।
प्रत्येक हरियो रूखमुनि तिमीले
पराई देवताहरू पुज्यौ।
तिमीले मेरो कुरा सुनेका छैनौं।’”
14 “हे विश्वासहीन सन्तान हो, मकहाँ फर्की आऊ।” यो सन्देश परमप्रभुबाट आएको हो। “म तिमीहरूका मालिक हुँ। हरेक शहरबाट तिमीहरू मध्ये एकजना र हरेक परिवारबाट दुइजना छान्नेछु अनि तिनीहरूलाई म सियोनमा लैजानेछु। 15 तिमीहरूका निम्ति मेरै जस्तो मन भएको शासकहरू दिनेछु। तिनीहरूले तिमीहरूलाई ज्ञान र समझशक्ति सिकाउनेछन्। 16 त्यस समयमा देशमा तिमीहरूको संख्या बढ्नेछ।” यो सन्देश परमेश्वरबाट आएको हो।
“त्यस समयमा, परमेश्वरसित भएको करारको सन्दूक विषयमा चर्चा हुने छैन, तिनीहरूले यस विषयमा सोच्ने छैनन्। अथवा सम्झने छैनन् अथवा उम्काउने छैनन्। अनि तिनीहरूले अर्को सन्दूक बनाउने छैनन्। 17 त्यस समयमा तिनीहरूले यरूशलेमलाई ‘परमप्रभुको सिंहासन’ भनी स्वीकार्ने छन्। परमप्रभुको सम्मान दिनलाई सबै राजाहरू यरूशलेममा आउनेछन्। तिनीहरूले आफ्नो अट्टेरी दुष्ट हृदयलाई अब उसो मान्ने छैनन्। 18 ती दिनहरूमा, यहूदाका परिवारहरू इस्राएलका परिवारमा सम्मिलित हुनेछ। तिनीहरू उत्तरमा भएको भूमिबाटसँगै आउनेछन्। तिनीहरू मैले तिनीहरूका पिता-पुर्खाहरूलाई दिएको भूमिमा आउनेंछन्।”
19-20 यो सन्देश परमप्रभुबाट आएको हो:
“म तिमीहरूलाई आफ्नै नानीहरूलाई झैं व्यवहार गर्नु चाहन्छु।
म तिमीहरूलाई अन्य जातिहरू भन्दा पनि अझ राम्रो भूमि दिन चाहन्छु।
तिमीहरूले मलाई ‘पिता’ भन्नेछौ
अनि सधैँ मेरो अनुशरण गर्नेछौ।
तर तिमीहरू आफ्नो लोग्नेहरूसित अविश्वासी रहेका पत्नी मानिसहरू जस्तै भयौ।
हे इस्राएलका परिवार, तिमीहरू म प्रति अविश्वासनीय भएका छौ।”
यो सन्देश परमेश्वरबाट आएको हो।
21 नाङ्गो डाँडाहरूमा तिमीहरूले रोइरहेको सुन्न सक्छौ।
इस्राएलका मानिसहरू दयाको निम्ति रोइरहेछन् र प्रार्थना गरिरहेछन्।
तिनीहरू एकदमै दुष्ट भए।
तिनीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई बिर्सेका छन्।
22 “हे अविश्वासि छोराहरू हो, मकहाँ फर्की आऊ।
तिमीहरूको विश्वासहीनता म हटाइदिनेछु।”
“मानिसहरूले भन्नै पर्छ, ‘हामी तपाईं कहाँ आउँदैछौं,
तपाईं परमप्रभु हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ।
23 डाँडाहरूमाथि मूर्ति पूज्न एउटा मूर्खता थियो।
पर्वतमा होहल्ला गर्ने दलहरू सबै गल्ती थिए।
निसन्देह इस्राएलको उद्धार
परमप्रभु परमेश्वरबाट आउँछ।
24 हामीहरू युवास्था देखि नै झूटो देवताले
हाम्रा पिता-पुर्खाहरूको सम्पत्ति नष्ट पारिदिए।
तिनीहरूका भेंडा़, गाई-गोरूका बथानहरू
अनि छोरा छोरीहरू पनि लगिदिए।
25 आफ्नौ लाजले हामी डुबौं
अनि हामीलाई अपमानले छोपोस्।
किनभने हामीले परमप्रभु हाम्रो परमेश्वरको विरूद्ध पाप गर्यौं।
हाम्रा पिता-पुर्खाहरूले पाप गरे,
अनि हाम्रो बाल्यकालबाट अहिले सम्म हामीले
हाम्रा परमप्रभु परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेका छैनौं।’”